Kwenzeka ntoni xa ndingafaki mpendulo kwityala lokuchazwa kwendlela yam ye-NJ? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Kwenzeka ntoni xa ndingafaki mpendulo kwityala lokuchazwa kwendlela yam ye-NJ?
Disemba 31, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
Oku kuqina kukuziqhelanisa nokuzikhusela. Sifuna ukuphendula umbuzo umbuzo oqhelekileyo esiwufumana malunga nokuziveza kusengaphambili, “Ndingathini ukuba andenzi faka impendulo kwityala lokuchaphazeleka eNew York kuzakwenzeka ntoni? ”
Ukuba awuzifaki mpendulo kumcimbi lowo uza kuba kwelityala lokungabonakali. Oko kuthetha ukuba ibhanki ngokusisiseko iya kukwazi ukuqhubela phambili ngaphandle kokufumana mntu wumbi ecaleni. Okwangoku kusenokwenzeka ukuba unezinyanga ezi-4 ushiyekile ekubambeni ityala lakho, kwaye unokufuna uncedo. Phantsi komthetho wemanyano, kwiimeko ezininzi, ibhanki okanye umbolekisi akanakuyiqala inkqubo yokuboniswa kwembali de wena njengomntu obolekayo angaphezulu kweentsuku ezili-120 kubugebenga bakho.
Ngaphandle kwempendulo awufumani ukhuphiswano kumcimbi wokuchazwa kweNkundla yase-New Jersey okanye ucothise inkqubo yokubonisa. Awufumani ukuphendula kwizityholo okanye ubeke ukubalwa. Ngaphandle kokufayila impendulo ilishwankathela ngokwangempela ixesha lenkqubo yokubonisa. Njengommangalelwa ekubonakalweni kwangaphambili uhleli kumalungelo akho kwaye uvumela umcimbi uqhubeke ngokukhawuleza. Awuwedwa kwinkqubo yokubonisa. Ukudalulwa kuphantsi kwe-US, kodwa NJ isakhokela ilizwe kunye nepropathi ngohlobo oluthile lwe Ukuvezwa kwezinto eNew Jersey.
Ungayibuyisela njani kwakhona imali-mboleko Phambi kokuba kuthengiswe abanye e-New Jersey
Unokuzama ukubuyisela imali-mboleko yakho, ngenxa yoko usenokungacwangcisi ukuphendula, nangona kunjalo unokungakwazi ukukubuyisela. "Ukubuyisela kwakhona" imali yakho mboleko kuxa ubamba iintlawulo ezingaphoswanga, kunye nemirhumo kunye neendleko, ukumisa ukubonwa. Ukuba ushiye iinyanga ezi-4 kwintlawulo yakho yokubambisa ngento yakho, ukuphinda ubuyise kwakhona akunakuba yeyona ndlela NJ Stat. UAnn. § 2A: 50-57 (Ukunyanga ngokungagqibekanga) kukuvumela njengomntu obolekayo ukuba anyange ukungabinayo into ekubambeni ityala ngalo naliphi na ixesha de kufike umgwebo wokugqibela.
Ukuba awufaki mpendulo kwinto yokuqala eza kwenzeka kukuba emva kweentsuku ezingama-35 igqwetha lebhanki liya kukusilela. Ngaphantsi Umgaqo weNkundla yaseJersey I-4: 6-1 ufumana iintsuku ezingama-35 zokuphendula isikhalazo esibonisa ukuba kutheni legqwetha kufuneka lilinde ukufayila. Baza kucela inkundla ukuba ifumane isigwebo esisiso. Ngamaphepha alula okugcwalisa inkundla kwaye acela unobhala wenkundla ukuba akusilele.
Ngaba ndifanele ndisebenzise iNkqubo yokuThintela ukuNqunyulwa kweJersey eNtsha?
Ukuba ujongene nembonakalo yangaphambili uyakufumana isaziso malunga Inkqubo eNtsha yokulamla kunye neNgcaciso yokuBhengeza kunye nesikhalazo. Ukuqhubela phambili kwi-NJ Stat. UAnn. § I-2A: 50-58 Ukuba uphendula kwisaziso zingekapheli iintsuku ezili-10 ngenjongo yokunyanga ukungabinamali mboleko yakho, ibhanki iyacelwa ukuba ikunikeze kwiintsuku ezingama-45 ezongezelelweyo ngaphambi kokuba ifune ukungena kwisigwebo sokugqibela. Ke, eli lithuba lokuba uphilise okungagqibekanga kwaye ufumane nexesha lokukwenza. Unganakho nokuza nesinye isisombululo sokulamla, ngoko ewe kuya kufuneka ufake isicelo senkqubo yokulamlela entsha yaseJersey. Usenokuba nakho ukufumana a ukulungiswa kwemali mboleko, Ukuthengisa kufutshane okanye ukuhlawula kufutshane.
Nangona kunjalo, wakube unqunyanyisiwe. Awunakho ukufaka ifayile ngaphandle kokufayilisha intshukumo yokuphuma kokungagqibekanga. Ukuba uzama ukufaka impendulo, iyakukhatywa kwaye uyakuxelelwa ukuba kufuneka uphume endaweni emiselweyo. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ukuba ufayile isindululo sokuphuma.
Ungasifaka njani esiGwetyweni esiGqibeleleyo kwiMeko yoNyaka yokuTyhilwa
Kukho izizathu ezithile zokuba kufuneka uphikisane. Kuya kufuneka ubonise ukuba kutheni ungafayile impendulo ngesizathu esihle. Masithi ufuna ukuphikisa ukuba unesizathu esivakalayo sokungaphenduli kwaye inkundla ithathela ingqalelo ukhuseleko olufanelekileyo. Ukuba ufuna nje ukuxelela inkundla ngamazwi akho ngento eyenzekileyo, usenokuwahlutha amalungelo akho. Inkundla ngamanye amaxesha ikhangela "ulwimi lomlingo" lwexeshana elisemthethweni elinika abo igunya lokugweba ngendlela ethile.
Isikhuselo esifanelekileyo sisikhuselo esibonisa ukuba sinendlela yokulwa nezinye izityholo kwisikhalazo. Ukuba iimpikiswano zakho kufanelekile. Ukuba uxabana ngendlela engalunganga, uya kuphulukana.
Yiloo nto eyenzekayo emva koko emva kokuba wonile.
Ke ngoku ekubeni ungaphendulanga kwaye usilele. Inyathelo elilandelayo lommeli webhanki iya kuba kukubuza malunga nomgwebo wokugqibela. Oku kufayilisha kwinkundla. Akunjalo kwakona abameli bebhanki abonakali kwaye ngamanye amaxesha unokufumana ixesha elongezelelekileyo phakathi kwezi fayile njengoko izinto zisenzeka. Ngaphandle kokuzikhusela indawo yokumisa elandelayo yi Intengiso yesherifu iyacwangciswa.
Ke akukho ndawo ininzi ishiyekileyo yokuqhutywa emva kokuba kungafakwa mpendulo. Ke impendulo elula kumbuzo: "Ngoku kuya kwenzeka ntoni ukuba andilandeli mpendulo eNew Jersey kwityala lam lesono."
Ukuba uyazi ukuba ixesha lakho lokuphendula ngokubhekisele phambili liyaphela kodwa alikagqitywa liphela usenokhetho, kwaye nokuba luphelile kukho ukhetho. I Imithetho ye-NJ ejikeleze ukutshintsha kwesimo esibonisa ixesha lonke. Sukuxhomekeka kwi-intanethi ukuba wenze naziphi na izigqibo zomthetho. Thetha no Ukuzikhusela kusengaphambili igqwetha lasimahla namhlanje kwaye uhambe kuzo zonke iinketho zakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngokubanzi silapha ukukunceda ngeli xesha linzima. Yenza icebo lokugcina ikhaya lakho okanye uhambe ngeendlela zokuthengisa ikhaya lakho okanye yakha ityala lakho emva kokubhencwa. Umnxeba 973-200-1111 okanye i-imeyile [Imeyile ikhuselwe]